ajụjụ FSX FSX Steam Edition Help
2 afọ 2 ọnwa gara aga #52 by Dariussssss
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu, njehie ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-ụfọdụ ajụjụ banyere FSX simulator, biputere ya ebe a. Ọzọkwa, gwa anyị banyere fixes na ngwọta maka dị iche iche na nsogbu na njehie na FSX.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: johnbrowning
7 ọnwa 1 izu gara aga #1183 by flaps1262
Ezigbo ndị agha, enwere m nsogbu iji wụnye minipanels nbudatara na A320 na mbipụta FSX. M na-edozi ntụziaka minipanel (na panel.cpg) na folda nke ụgbọ elu ma mbụ minipanel adịghị agbanwe. Enyemaka ọ bụla?
Daalụ maka ọdịmma gị, ihe kacha mma.